Joe Biden oo loo doortay Madaxweynaha 46-aad ee Maraykanka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Joe Biden oo loo doortay Madaxweynaha 46-aad ee Maraykanka.
Joe Biden oo loo doortay Madaxweynaha 46-aad ee Maraykanka.
Musharaxa Xisbiga Demoqoraadiga Joe Biden oo soo noqday madaxweyne ku xigeenka Maraykanka muddo xileedkii Obama ayaa ku guulaystay madaxtinimada dalkaas, ka dib maalmo ay natiijada codadka ee gobollada Maraykanka ku loolamayeen madaxweyanaha waqtigiisu dhammaaday ee Donald Trump.
Dhinaca kale codadka ay dhiibteen shacabka Maraykanka ayuu Joe Biden oo 78-jir ah ka helay in ka badan 74.8-milyan oo cod, halka Trump oo xisbiga Jamhuuriga ah uu helay ilaa 70.5-milyan oo cod.
Telefeshinnada waawayn ee Maraykanka sida CNN iyo Fox News ayaa baahiyey guusha Joe Biden iyo dabbaal dagyada ay samaynayaan taageerayaashiisa, sidoo kalena taareegayaasha Trump ayaa ka carooday sida ay wax u dhacayaan, waxaana la arkayey ciidamo hubaysan oo hortaagan, si ay u ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambaynta.
Gudiga FEC (Federal Election Commission) ee Maraykanka ayaa laga sugayaa natiijada kama dambaysta ah ee doorashada.
Trump oo maalayey Maraykanka 4-tii sano ee ugu dambaysay ayaa lagu dhaleeceeyey siyaasadiisa ad adag ee ku wajahan dadka madawga ah iyo dalalka Islaamka, waxaana taasi ay sababtay in doorashadii dhacday 3-da bishan in looga adkaado.
Biden ayaa aqalka cad u wareegi doona dhawaan, waxaana uu xilka la wareegi doona bisha January ee sanadka soo socda.
Previous articleWasiirka Beeraha Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dalka Masar u fadhiya Soomaaliya+(SAWIRRO).
Next articleMadaxda caalamka oo u hambalyeysay Joe Biden iyo Kamala Harris.